जुन-सुकै ल'तबाट छुटकारा पाउन एउटा सजिलो उपाय !
जुन-सुकै ल’तबाट छुटकारा पाउन एउटा सजिलो उपाय !
बढ्दो शहरीकरण, व्यस्त जीवनशैली र आधुनिकिकरणका कारण पछिल्लो समय युवापुस्तामा मौलाउँदै गएको कुलतको विषयमा त सबैलाई अवगत नै छ । आजभोलि कुनै न कुनै नशाको लत लागेका मानिसहरु थुप्रै भेटिन्छन् ।
Nepal Online Patrika: बढ्दो शहरीकरण, व्यस्त जीवनशैली र आधुनिकिकरणका कारण पछिल्लो समय युवापुस्तामा मौलाउँदै गएको कुल’तको विषयमा त सबैलाई अवगत नै छ । आजभोलि कुनै न कुनै न’शाको लत लागेका मानिसहरु थुप्रै भेटिन्छन् ।
तर, धेरैलाई आफूलाई लागेको न’शाको ल’त छुटाउने उपायको बारेमा खोजी भने जरुर हुने गर्छ । धेरैले न’शाको लतबाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् ।
एउटा यस्तो उपाय छ जसले कुनै पनि न’शाको ल’त छुटाउन मद्दत गर्न सक्छ । त्यसमा दा’ख प्रमुख मानिन्छ । यसलाई आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा लिइन्छ । जो मानिसमा धु’मपा’न, मध्य’पान, खै’नी, गु’ट्खा, पान, त’म्बा’कु जस्ता पदार्थको लत लागेको छ ती व्यक्तिहरुका लागि दाख निकै उपयोगी साबित हुनसक्छ ।
यसको लागि दाखमा मरिच, सुकमेल र दालचीनी मिसाएर मसिनो धुलो बनाउने र त्यसलाई स–सानो चक्की बनाएर राख्ने । र त्यसलाई बारम्बार मुखमा हालेर चुस्ने गर्नुपर्छ । उक्त चक्कीले न’शाका कारण शरीर कमजोर हुने समस्याको पनि समाधान गर्छ । साथै, यसले पाचन प्रक्रिया समेत सक्रिय गराउँछ ।
कोरोना भाइरस14 hours ago
मनोरञ्जन14 hours ago
कोरोना भाइरस15 hours ago
खेलकुद16 hours ago